Telestream's Vantage Nwere Ike Inyere Ndị Mgbasa Ozi Aka Inweta Ọsọ Ọrụ Ndị Ọrụ Faster Digital | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Home » Apụta » Telestream's Vantage Nwere Ike Nyere Ndị Mgbasa Ozi Nweta Mmepụta Ọsọ Ọrụ Dijitalụ Ngwa
Ihe omuma vidio obula n’ime ihe okike n’eme ka o baa uru, obughi na ozi nke ika. Mana ogo ya ka egosiputara ya na-enye ya ohere iru ndị ngbo n’iki ike. Dabere na njiri mara na nha, njikwa ọdịnaya nwere ike ịdị oke egwu dịka usoro esi mepụta ya, ọkachasị na teknụzụ dijitalụ nke na-aga n'ihu na-eto eto na-aga n'ihu. Nke ahụ bụ ebe ụlọ ọrụ na-amasị Telestream na-abata na foto a, dika ha nwere n’ime iri afọ abụọ gara aga dịka ndị na-eweta ngwanrọ. Telestream na-eme ka ọrụ mgbasa ozi dijitalụ nke onye ọrụ rụọ ọrụ, yana iji usoro mgbasa ozi ha, Vantage, ndị na-emepụta ọdịnaya ga-ejide n’aka na ha ga-enwe oge dị mfe iji hazie njikwa ọrụ n’azụ ọdịnaya vidiyo ha.
Ebe ọ bụ na 1998, Telestream emeela ọkachamara na mmepe nke ngwaahịa na-eme ka o kwe omume inweta ọdịnaya vidiyo ọ bụla na ndị na-ege ntị n'agbanyeghị ihe okike, nkesa ma ọ bụ usoro nlele. N'obere usoro mgbasa ozi dijitalụ niile, site na njigide na nlele, maka ndị ahịa site na ndị ọkachamara kachasị elu, Telestream Usoro ngwaahịa esiwo na ngwa desktọpụ yana ngwa gafere n'obere igwe, sistemụ igwe mgbasa ozi dijitalụ na sistemụ arụmọrụ zuru oke.
Telestream na-enyere ndị ahịa ya aka site n’inye ha nnukwu mpaghara azụmahịa dị iche iche na-enyere ha aka ịzụrụ uru ọdịnaya vidiyo ha. Companylọ ọrụ ahụ na-enyekwa ngwa ọrụ vidiyo dijitalụ na ihe ndị ọzọ chọrọ ka azịza ya rụọ ọrụ nke nyere ha na azụmaahịa ha ịgbanwe vidiyo na desktọpụ na n'ofe ụlọ ọrụ ahụ.
Telestream Usoro ngwaahịa na - agbasa ndụ usoro mgbasa ozi dijitalụ niile, gụnyere ijide na ingest; QC, ndụ na ntinye na ntinye; okwuchi, igwu egwu na nnyocha, nnyefe, na-enuba; akpaaka ọrụ, yana nyocha vidiyo na mmesi obi ike nke ọrụ maka ọrụ ọrụ ahụ.
TelestreamNgwurugwu mgbasa ozi Vantage Media
Telestream Vantage Ndi nwe ihe omuma, ndi n’emeputa ihe, na ndi n’enye ya n’ile bu nke ha ga - eme ngwa ngwa, di mfe, ma nwekwa onu ahia nke oma, dozie ya, bido ya, tinye ya n’ezie, kesaa ya. A na - eme ka ikpo okwu a dabere na ihe owuwu a na - agbanwe agbanwe na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ, yana ọ nwere ọrụ dị iche iche na ndị na - ejikọ ọnụ iji mepụta usoro ọrụ arụmọrụ dị egwu niile n'okpuru njikwa sistemụ jikọtara ọnụ. Vantage na-enye ọrụ nke gụnyere:
Nchịkwa mgbasa ozi
Vantage njikọta na-eme ka enweghị nke enweghị ike, ntinye-ọkwa API na sistemụ ndị ọzọ. Ikpo okwu na-enye scalability site na usoro ihe eji adi mfe na dikwa mgbagwoju anya, otutu sava na enyere ndi oru aka ime ihe ha na achoghi agha. Vantage Ọ na-arụkwa na ngwaike, ngwaike na ngwaike ngwaike, ma ọ bụ na GPU-ngwa-ngwa Lightspeed® Server, nke na-enye ya ohere iji ike niile nke usoro ihe ntanetị nke ọkwa IT na usoro kachasị mma.
Vantage's transcoding, workflow, na sistemu sistem na-eji teknụzụ ndị kachasị ọhụrụ, nke na-enye ya ohere iweta ogo nke pristine, usoro nhazi ọpụrụiche, yana usoro ọgụgụ isi na sistemụ igwe eji arụ ọrụ nke ukwuu nke ndị ọrụ. Vantage Enwere ike ịgbatị nhazi site na sistemụ ụlọ na igwe ojii ka ị wee lebara ọnụ ọgụgụ kachasị elu na nchọta mmepụta, ma ọ bụ nwalee echiche azụmahịa ọhụrụ.
Mụta ihe banyere Vantage site na ịga na www.telestream.net / vantage / nlele.htm.
Ihe Mere O ji aga Telestream
N’afọ iri abụọ na abụọ nke ihe ịga nke ọma, Telestream anọwo n’iru mmalite nke ihe ọhụrụ na ụlọ ọrụ vidiyo dijitalụ ebe ọ bụ ọsụ ụzọ na transcoding vidiyo na ntanetị na ọnụọgụ mgbasa ozi kachasị elu na netwọk IP. Laslọ ọrụ ụlọ ọrụ laser na-elekwasị anya na ihe ọhụrụ na-aga n'ihu sitere na vidiyo siri ike na usoro telivishọn nke ndị otu njikwa ya, nke merela ya nnukwu uru site na 2001, nke a gụnyere mgbakwunye nke mmụba ego ọnụọgụ abụọ maka afọ ọ bụla na-esote. Typedị ihe ịga nke ọma a kwere Telestream iji kwado ihe nzụta asaa dị iche iche bụ nke gbalitere ọfụma nke transcoding ya ma kwe ka ọ banye na nkwanye ndụ, QC, nyocha vidiyo, na oghere mmesi obi ike ọrụ. Telestream ugbu a na-akwalite ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu site na ịnakwere usoro mmepe ngwanrọ ngwanrọ na-enyere aka na ngwangwa nke ihe ọhụrụ ya na ahịa na-agbanwe ngwa ngwa.
Maka ozi ọzọ banyere Telestream, gaa na www.telestream.net /telestream-nmao.htm.
arụ ọrụ arụmọrụ Mgbakọ ọdịnaya mmepụta ọdịnaya dijitalụ na-arụ ọrụ Graham Chapman Prmoted toEditor mwekota njikwa ọdịnaya nyocha nyocha njide mgbasa ozi usoro eji arụ ọrụ mgbasa ozi nhazi metadata ihe ngwanro Ụgha & Akụrụ Telestream Ngbanwe Igwe TV Vantage ọdịnaya vidiyo virtual eziokwu ọdịnaya anya 2020-04-29
Previous: Ọkachamara Ọhụụ Anya
Osote: Ruy Garcia na-agwakọta Wendy na Midsommar na NUGEN Audio